Sahirana mifety | NewsMada
« Aoka aloha fa mbola sahirana ny sefo… ». Sanatria ve ho io ny setrin’ny fitalahoan’ny valalabemandry, nentin’ny tonian-dahatsoratry ny gazety Taratra, omaly ? Raha ny marina mantsy, tsy vao izao io fangatahana maika, eny, tena maika io ary tsy miankina amin’ny mpitondra sy izay olana ara-politika sedrainy ny tokony hamahana ny olana, ny tsy fandriampahalemana.
Saingy, tsy tanteraka mihitsy io hetahetam-bahoaka io. Toa manan-kambara hatrany izay heverina ho tompon’andraikitra isan’ambaratongany : efa misy ny paikady, efa toy izao sy toy izao ny zava-bita, efa manao ny ainay tsy ho zavatra izahay, sns. Saingy, ny zava-misy no aoka hitsara.
Efa isan’andro ny asan-dahalo, any ambanivohitra any, fa ny tena malaza, ankehitriny, ny fanaovana lasibatra ireo vahiny mpizahatany, izay anisan’ny loharanon-karen’ity firenena ity. Ny tantsaha, ny mpivarotra, ny mpandraharaha, ny mpizahatany, izany hoe, na mahantra na manan-katao, samy tsy misy afa-bela.
Mbola tsy afa-bela ihany koa ny paosin’ny tsirairay amin’ity resaka vidin-tsolika midangana ity. Na olon-tsotra manana fiara, na mpitatitra, ny olon-drehetra mihitsy, samy mangidihidy loha amin’ity olana iray goavana ity. Tsy maintsy ny madinika ihany no hizaka ny mafy, raha tsy hoe mahita vahaolana matotra sy maharitra angaha ny mpitondra ?
Saingy, hatramin’izay aza moa, tsy hita izay tena fivoaran’ny toe-draharaha, mainka fa amin’izao ankatoky ny fety izao ? Ahina tokoa ny hoe mbola sahirana ny sefo, mbola sahirana mifety na manomana fety. Tsy ny be bokotra ihany no tian-kambara eto fa ireo tompon-toerana sy manam-pahefana ary mpanome baiko amin’ny sehatra rehetra, any ambony rehetra any.
Ny azy ireny mantsy, araka ny efa mahazatra, izay hita fa toa ratsy, ny fotoan’ny fety toy izao no tena isehosehoana sy hakana ny fon’ny vahoaka, amin’ny fikarakarana lanonana sy fanolotolorana kely. Ireo sahirana koa, tsy maintsy mifety !